Summary of books in Nepali /"Living In Your Top 1%" पुस्तकको नेपालीमा सारांश - LweoNepal
Summary of books in Nepali /”Living In Your Top 1%” पुस्तकको नेपालीमा सारांश
Posted on: August 30, 2020 Last updated on: September 11, 2020 Comments:0Categorized in: मनोविज्ञान Written by: Admin
Summary of the book “Living In Your Top 1%” in Nepali
सारांश: Living In Your Top 1%
“Own Your Everyday” पुस्तकले तपाईलाई विज्ञान समर्थित तरीकाहरूबाट आफ्नो जीवनको अवरोधहरू हटाउन, र आफ्नो लक्ष्य र सपनाहरू प्राप्त गर्न मार्गदर्शन गराएर, आफ्नो राम्रो संस्करण बन्ने र आफ्नो पूर्ण सम्भाव्यता full potential मा जीवन जीउने मद्दत पुर्याउछ।
ठूला प्रगतिहरु, ठूलो विचारलाई साना चरणहरूमा बिभाजित गरेर प्राप्त हुन्छ।
तपाईंको फोन स्क्रिन बन्द गर्नुहोस् र त्यसमा तपाईंको प्रतिबिम्ब हेर्नुहोस्।आफुलाई सोध्नुहोस्, के तपाईं आफ्नो जीवनमा कती खुसी हुनुहुन्छ। तपाईले दिनुहुने उत्तरहरूका बारेमा तपाईलाई कस्तो लाग्छ, विचार गर्नुहोस्। के तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? के तपाईं आफ्नो पूर्ण सम्भाव्यता full potential मा बाँच्नुभएको जस्तो लाग्छ?
यदि तपाईं आफ्नो कठिन सत्यसंग सामना गर्न लजाउनु हुन्न भने तपाईं राम्रो जीवन जीउने जादै हुनुहुन्छ। तपाईं जीवनमा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर अौल्याएर हेर्दा तपाईंलाई दुःख लाग्छ र तपाईं त्यो स्थानमा हुन चाहानुहुन्न भने , तपाईंको जिवनमा परिवर्तन अावस्यक छ र यो परिवर्तन सम्भब छ।
तपाईं आफ्नो पूर्ण क्षमता full potential मा पुग्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ आफ्नै कथाको नायक भनेर बाच्न, र तपाईंले सँधै सपना गर्नुभएको जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ । यसका लागी तपाईंलाई आवश्यक चिज भनेको सही उपकरणङहरु tools हो।
र ती उपकरणङहरु तपाईंले Alissa Finermanको Living in Your Top 1%: Nine Essential Rituals to Achieve Your Ultimate Life Goals पुस्तकबाट पाउनुहुनेछ। तपाईले पत्ता लगाउनु हुनेछ कि वास्तवमा, विज्ञानले आफुलाई सुधार गर्ने र आफुले चाहेको व्यक्ति बन्ने सोच/सपना बारे के भन्छ!
हेरौं, हामी यी3पाठहरू सिकेर हाम्रो जीवन कति परिवर्तन ल्याउन सक्दा रहेछौ ।
विश्वास गर्नुहोस् ! तपाईंले आफ्नो बारे जे पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो सत्य हो।
यदि तपाईं आफ्नो कमजोरीलाई हटाउन आफ्नो strength खोज्ने र सुधार गर्ने गर्नु हुन्च भने
तपाईं धेरै खुशी , अधिक सफल हुनुहुनेछ।
स्पष्ट लक्ष्यहरू बनाएर, सानो कदमको साथ तिनीहरू प्रति काम गर्दा पनि ठुलो खुशी मिल्छ।
के तपाइँ प्रेरणाको दैनिक dose खुराक को लागी तयार हुनुहुन्छ ?
पाठ १: तपाइँले सही मानसिकता बनाउनुभयो भने तपाइँले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईंले यस्ता समयहरुलाई याद गर्नु हुन्छः जब तपाईं गम्भीर रूपमा असफल हुनु भएको थियो ? के तपाईंले फेरी उठेर पुन: प्रयास गर्नुभयो? वा तपाइँको मनोवृत्तिमा “म कहिल्यै परिवर्तन गर्न सक्दिन” भन्ने मनोवृत्ति थियो?
क्यारोल ड्वेकले, जीवन परिवर्तन गर्ने उनको पुस्तक Mindsetमा असफलताप्रति हामी कस्तो प्रतिक्रिया देखाउछौं भनेर हामीलाई अन्वेषण गराएकि छिन्। यस पुस्तकमा उनले आफुले गरेको अनुसन्धान को बारेमा बताएकि छिन्, जसमा व्यक्तिको बृद्धि वा निश्चित मानसिकताको बारेमा बर्डन गरिएको ।
यदि तपाईंसँग केहि बारे मा निश्चित मानसिक दृष्टिकोण छ भने, तपाईं असफलता पछि हार मान्नुहुनेछ। तपाईं, जति अब्यास गरे पनि आफ्नो क्षमता तथा मानसिक वा शारीरिक परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न भन्ने सोच्नुहुन्छ? यो सोच्ने तरिकाले तपाइँ स्वयम्को सर्वश्रेष्ठ रुप बन्ने सम्भावनालाई कुच्दै हुनुहुन्छ।
अर्कोतर्फ यदि कसैमा, परिवर्तन जतिसुकै गाह्रो भए पनि सम्भव छ भन्ने मनोवृत्ति छ भने उसलेले हरेक पटक उठेर पुन: प्रयास गर्छ। यस कारणले गर्दा, उसले नयाँ चीजहरू प्रयास गर्ने मौका पाउछ र गाह्रो काम भए पनि जारी राख्छ। उनीहरूलाई थाहा छ कि, व्यक्तिगत विकासले कसरी काम गर्दछ। र यसको परिणाम स्वरूप उनीहरू पूर्ण क्षमता self-full potential मा पुग्न सफल हुन्छन्। ल अब, त्यसोभए तपाईं कसरी आफ्नो अक्षम सोचलाई हराउन सक्नुहुन्छ र वृद्धि मानसिकता विकास गर्न सक्नुहुन्छ?
यो मानसिकता विकासको लागि, आफु नकारात्मक हुन गाह्रो हुने खालको वातावरणको सिर्जना गर्नुहोस् ।
एउटा जार लिनुहोस्, र प्रत्येक पटक तपाईं नकारात्मक हुदा, त्यसमा एक डलर राख्नुहोस्। प्रत्येक पटक जब तपाईंले “म सक्दिन” वा “म कहिले परिवर्तन हुदिनँ” जस्ता वाक्यांशहरू प्रयोग गर्दा, पैसा जारमा हाल्नुहोस्। जब महिना सकिन्छ, पैसालाई तपाईंको मनपर्ने परोपकारि सस्थामा दान गर्नुहोस्।
पाठ २: तपाईको शक्ति/strength के हो पत्ता लगाउनुहोस् र त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने काम गर्नुहोस्, यसले तपाईलाई खुशी पार्दछ र सफलता दिलाउँदछ।
म सधै ममा भएका खराबिहरु ठीक गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्थे। धेरै चोटि, म आफुमा खुसी थिइन, किनकि मैले मेरो शक्तिको बेवास्ता गरिरहेको थिएँ। तर जब मैले आफ्ना कमजोरीहरूलाई ध्यान दिन छोडिदिएँ र काम/प्रगति गर्न ठाउँ पाए र मेरो सकारात्मक मनोवृत्तिका कारण, मेरो जीवनमा धेरै परिवर्तन आयो।
मैले, आजकल बढी productive hour काम गर्न थालेको छु, जुन मैले मेरो careerको कुनै पनि बिन्दुमा भन्दा स्वाभाविक रूपमा धेरै राम्रो गरीरहेको छु । यो प्रगतिको कारण ? म जे गर्दैछु यसमा म १० गुणा खुशी छु। म यो कार्य गर्न चाहन्छु, त्यसैले मैले productive प्रगतिशील हुने बारे तनाव लिनु पर्दैन।
The Gallup Organization ले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगायो कि आफ्नो पूर्ण क्षमतामा पुग्नको लागि आफ्नो सामर्थ्य strength मा केन्द्रित हुनु अति आवश्यकता छ। तिनीहरूको अध्ययनले पत्ता लगायो कि जो, आफ्नो क्षमता/strength प्रयोग गर्न सकिने खालका पेशा लागेका छन्, उनिहरुको आफ्नो काममा अरु भन्दा ६ गुणा बडि engage भेरहेका थिए। उनीहरू अरुको भन्दा ३ गुणा उत्कृष्ट जिवन शैलि life style थियो।
Positive Psychologyका जनक/father Martin Seligmanको अनुसन्धान अनुसार
जसले आफ्नो शक्ति/strengthको प्रयोग गर्छन् उनिहरुले खुशी जिवन बाचेका हुन्छन्।
यदि तपाईंले कसैलाई जहिले खुशी देख्नु हुन्छ र आफ्नो best peform गरि रहेको देख्नु हुन्छ भने, त्यसको रहस्य पनि यहि हो।
तपाई केमा राम्रो हुनुहुन्छ भनेर फेला पार्न googleमा भएका quiz solve गर्नु होस् अथवा, तपाईलe राम्रोसँग चिन्ने मानिसहरुलाई तपाईको सामर्थ्य/strengthको बारेमा सोध्नुहोस्:
उदाहरणको लागि, आफ्नो आमा्बुबा वा साथिहरुलाई सोध्नु होस्।
पाठ३: तपाई आफ्ना लक्ष्यहरूमा स्पष्ट हुनुहोस् र सानो कदम चालेर तिनीहरूमा काम गर्न सुरू गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग पहिले देखिनै लक्ष्य छैन भने, तपाईंले लक्ष्य बनाउनु पर्छ।विज्ञानका अनुसार, लक्ष्य भएका व्यक्तिहरू अरु भन्दा खुशी हुन्छन्। जब तपाईं आफ्नो सपनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ,तपाईंसँग नकारात्मकता संग लड्ने प्रेरणा, आशा, विश्वासको विकास हुन्छ।
उदाहरणका लागि, Arnold Schwarzenegger सधैं उच्च महत्वाकांक्षा राख्थे र ती महत्वाकांक्षा प्राप्त गर्ने योजनाहरू पनि बनाएका थिए। यसको कारण, उहाँ शरीर सौष्ठव, अभिनय, राजनीति, र रियल इस्टेटमा अविश्वसनीय रूपमा सफल हुनुहुन्छ!
तपाईं त्यहाँ सोचि रहनु भएको छ होला “यो कुरा सुन्दा त राम्रो छ तर, म मेरो लक्ष्यहरूमा कसरी निरन्तर लागि परि रहने।” Well, that’s normal, तपाईले के सिक्न लाग्नु भएको छ त्यसले तपाईलाई फेरि यसको बारेमा चिन्ता लिनु नपर्ने बनाउँदछ। तपाईको intrestको बिषयले तपाईलाई तपाईको काममा निरन्तरता दिन सिकाउछ।
सर्वप्रथम, जाँच गर्नुहोस् कि तपाई जुन मा काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको मानले त्यस कामलाई स्वीकार्यको छ वा छैन।यसले तपाइँलाई काममा निरन्तर रहन प्रेरित गर्दछ। आफैलाई सोध्नुहोस् कि तपाईले
कस्ता चिज हरुलाई प्राथमिकता दिन चाहानुहुन्छ , त्यसपछि ती प्राथमिकताहरूका आधारमा आफ्नो लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस्।
त्यस पछि , सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको लक्ष्य र त्यसलाई प्राप्त गर्ने योजनाहरुः विशिष्ट, मापनयोग्य, प्राप्य, समय-सीमित, र वास्तविक छ।
अन्तमा, सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, यी सपनाहरु प्राप्त गर्न को लागी तपाइँले तपाइँको शुरुवाती कदमहरु साना बनाउनुपर्छ। तपाईको लक्ष्यहरू अपरिहार्य बनाउनको लागि तपाईले गर्न सक्ने यो उत्तम चीज हो।
किनभने यसले तपाईंलाई स्थिर रहन मद्दत गर्दछ,र आत्मविश्वास बडाउछ। तपाईं अभिप्रेरित हुनबाट जोगिनुहुनेछ,र तपाईंको सफलताको पनि संभावना बढाउँछ!
Tagged as: summaro of book own your top 1 percent in neplali summary of book in nepali summary of books summary of books in nepali Summary of the book "Living In Your Top 1%" in Nepali/नेपालीमा सारांश सुममारय ोउ बोोक सुममारय ोउ बोोक िन नेपालि सुममारय ोउ बोोकस िननेपालि
Previous Post Summary of books in Nepali / “Own Your Everyday”पुस्तकको नेपालीमा सारांश
Next Post Summary of books in Nepali/ “The Pragmatist’s Guide To Relationships” पुस्तकको नेपालीमा सारांश